I-South African Youth Climate Change Coalition (SAYCCC) ibinomhlangano mayelana nezeMvelo e-UKZN ekhempasini yaseMgungundlovu – lo bekungumhlangano wabo wokuqala emuva kokugunyazwa uMkhandlu Wabafundi (SRC) wase - UKZN ekuqaleni kwesimesta yesibili.
I-SAYCCC, okuyinhlangano ephethwe yintsha ihlose ukuqwashisa abantu abasha ngokushintsha kwesimo sezulu. Yaqalwa abafundi ekhempasini ese-Thekwini yase-UKZN emva kwengqungquthela yentsha eyandulela ingqungquthela YeNhlangano Yezizwe Yezokushintsha Kwesimo Sezulu (COP17) eThekwini ngonyaka wezi-2011.
Le ngqunguthela yentsha (COY7) eyayiphethwe yi-Australian Youth Coalition ibambisene nabantu abasha umhlaba wonke yakhuthaza intsha yakuleli ukuthi iqale eyayo inhlangano ezobhekelela ushintsho lwesimo sezulu, lokhu kwaholela ekusungulweni kwe-SAYCCC ngokubambisana nezinye izinhlangano zentsha zomhlaba zokulwa noshintsho lwesimo sezulu.
Emva kokuqala ukusebenza ngonyaka wezi-2011, inhlangano yabhekana nobunzima ekusebenzeni ngenxa yokuswela ukwesekwa ngezinsizakusebenza nokuthi futhi iningi lababengamalungu okuqala babesafunda ezindaweni ezihlukene ezweni.
Ekuqaleni konyaka wezi-2015 abafundi ababeyingxenye yengqungquthela i-COY7 bayivuselele kabusha inhlangano, bayithula ngokusemthethweni ngokwenza ingqungquthela encane ukuze ixhumane nezinye izinhlangano zenstha eNingizimu Afrika. Lo mcimbi ubusekelwe yizinhlangano ezifana ne-Greepeace, 350.org, Womin, WTLP ne-Earth Warriors.
Ngenxa yalomhlangano walaba bafundi, i-SAYCCC isinamaziko e-Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU) e-Eastern Cape nase-North West University (NWU) esifundazweni sase-North West, Abafundi kuleli qembu bafunda izifundo ezinhlobonhlobo.
Umhlangano i-Environmental Indaba obusekhempasini yaseMgungundlovu ekupheleni kukaNtulikazi bewuhlose ukukhuphula izinga lokwazi kwabafundi baseMgungundlovu ngokushintsha kwesimo sezulu. Iqembu likholwa ukuthi ukuzibandakanya kwentsha kungaba nomthelela omkhulu empini ebhekene nokuxhashazwa nokucekelwa phansi kwemvelo.
Umcimbi ubuhlanganise nezinkulumo ezithulwe abamele i-UKZN SAYCCC, abezemfundo, ithuba lemibuzo nezimpendulo, izinkulumo ezenziwe ezinye izinhlangano nezinhlangano zabafundi kanye nenkulumo yosuku eyethulwe uMnu Khomotso Ntuli we-350 Afrika.
I-350 Africa, ebixhase ngezikibha ze-SAYCCC nokudla komcimbi, iyingxenye yenhlangano yomhlaba i-350 egqugquzela umhlaba ukuba usukume ubhekane nengozi yesimo sezulu.
Iziko labafundi le-International Association for Impact Assessment South Africa esebenzisana nomkhakha weziFundo ngamaZwe, lethule inkulumo kanti uKusasa Sithole ukhulume nezithameli ngeziko le-IAIASA labafundi, okuyinzuzo uma uyilungu nokuthi kujoyinwa kanjani.
‘Ukuhlangana kwemikhakha yababebambe iqhaza kukhombe izinkinga esibhekene nazo kuyona yonke imikhakha yezokufunda nokuthi zinomthelela omkhulu kakhulu,’ kusho uSamiksha Singh weziko labafundi le-IAIASA KZN.
‘Lo mcimbi ukhombise ukuthi kunokukhathazeka emhlabeni wonke nokuthi intsha yamanje, ngale kwezinga lemfundo noma ibala, inolwazi ngemvelo futhi ilwela ukwakha izwe elihlanzekile neliphephile ngomuso.’
Iqembu linethemba lokuthi lizoheha ukwesekwa abanye abafundi nabasebenzi base-UKZN. Ukwesekwa abasakutholile manje obe-350 Afrika.